Mon, May 25, 2020 at 2:15pm
वृद्ध भत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढेर ३ हजार पुग्यो ! १३ लाख जेष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित हुने
काठमाडौँ, १५ जेठ नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा एक हजार वृद्धभत्ता बढेको घोषणा गरेका हुन् । अब ७० वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यसअघि दुई हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका थिए..
रोजेको स्थानीय तह छान्न पाउने गरी लोक सेवाले खुलायो विज्ञापन (स्थानीय तह र पदसंख्यासहित)
काठमाडौँ, १५ जेठ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्न विज्ञापन खुलाएको छ । गोरखापत्रमा बुधबार सूचना छापेर आयोगले स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिकका लागि आवेदन माग गरेको हो। आयोगले चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारी माग गरेको छ । आयोगबाट उत्तिर्ण भएका उमेद्वारलाई रोजेको स्थानीय तहमा खटाइनेछ । उनीहरुलाई स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिने आयोगले गरेको विज्ञापनमा उल्लेख..
गर्मि मौसममा यसरी चम्काउनु होस अनुहार
काठमाडौँ, १५ जेठ सुन्दर बन्ने रहर सबैलाई भएर नै सुन्दर बन्नका लागि सधै पार्लर गएर अनुहारको चम्काउन थाल्छन महिलाहरु । नीम वा तुलसीयुक्त फेसवासले अनुहारको फोहोर हटाउनुका साथै अनुहारमा हुने विभिन्न संक्रमणको खतरा कम गर्छ । फेसवासको प्रयोगपछि अनुहारलाई गुलाव जलले राम्रोसँग पुछ्नुपर्छ ।यसले अनुहार ताजा बनाउनुका साथै रक्तसञ्चार चुस्त बनाउँछ । -अनुहार स्वस्थ तथा चम्किलो बनाउन फेसियल स्क्रबको प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेसियल स्क्रबको प्रयोगबाट मृत कोषिका..
चर्को घाम र तातो हावाले जनजीवन प्रभावित, मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, १५ जेठ । पश्चिमी वायुको प्रभावले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । न्यून चापीय रेखा नेपाल प्रवेश गरेकाले अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षा सम्भावना रहेको मौसमविद् सुजन सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काललाई भारी वर्षाको सम्भावना छैन । केही दिन निरन्तर वर्षा र केही दिन..
टाइट जीन्स लगाउने युवतीहरू सावधान, स्टाइलिश देखिने चक्करमा बाँझो भइएला !
काठमाडौं, १५ जेठ आधुनिक जीवनशैली अपनाएर स्टाइलिश देखिने चक्करमा युवतीहरू नयाँ फेशन ट्रेन्ड अपनाइरहेका हुन्छन् । आजकल टाइट जीन्स लगाउने फेशन खुबै चलेको छ । आफ्नो फिगर राम्रो देखिन्छ अनि फेशनेबल भइन्छ भनी टाइट जीन्स लगाउने महिलाहरूले स्वास्थ्यलाई हानि गरिरहेका हुन्छन् । पर्फेक्ट फिगरको चक्करमा क्यान्सर र हृदयघात जस्ता गम्भीर रोग निम्तिरहेका हुन्छन् । टाइट जीन्स लगाउँदा गर्भाशय साँघुरिन्छ र बाँझो हुने खतरा..
वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाख युवा, कुन देशमा कति ?
काठमाडौँ, १४ जेठ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएइपनि स्वदेशमा रोजागरीका उपयुक्त अवसर नभएको भन्दै ४३ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ लाई नियाल्दा : आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म ४३ लाख ६५ हजार ४१५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तीमध्ये ४१ लाख ६७ हजार ३१० पुरुष र एक लाख ९८ हजार..
के तपाईँको खुट्टा निदाउँछ ?
काठमाडौँ,जेठ १२ तपाईँले पक्कैपनि कुनै न कुनै बेला खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने अवस्थाको महसुस गरेको हुनुहुन्छ होला । एकैठाँउमा नचलिकन बस्दा वा खुट्टा खुम्च्याएर बस्दा प्राय खुट्टा निदाउने गरेको पाइन्छ । खुट्टा भारी भएजस्तो हुने, स्पर्श अनुभव गर्न नसक्ने, झन्झनाहट हुने अवस्थालाई खुट्टा निदाएको भनिन्छ । खुट्टामा दवाव पर्न जाँदा यस्तो हुने गर्छ । हाम्रो शरीरमा स्नायुकोष( नर्भ)ले मस्तिस्कसम्म पुरयाउने काम..
गर्मीमा कोल्ड ड्रिङक्स पिउनुभन्दा खरबूजा खानु उत्तम ! यस्ता छन् फाईदा
काठमाण्डौ, १३ जेठ गर्मिमा शररीरलाई फ्रेस राख्नभ फलफूल निकै फाइदा जनक मानिन्छ । गर्मी मौसम लागेसगैँ बजारमा खरबूजा छ्याछ्याप पाउन थालिसकेको छ । तपाई हामीलाई पनि बाहिर गर्मिमा अरु खाना भन्दा खरबूजा नै खान मन पर्छ । गर्मीमा खरबूजा शरीरको लागि धेरै फाइदाकारी मानिन्छ । यसले शरीरमा पानीको मात्रा पूर्ति गर्नुका साथै छालामा चमक ल्याउछ । गर्मीमा कोल्ड ड्रिङक्स पिउनुभन्दा खरबूजा खानु उत्तम..
नेपाल सरकारले वितरण गर्यो गाउँ ब्लकका जग्गाधनीलाई पहिलोपटक दर्ता प्रमाणपत्र
बुटवल, १२ जेठ । नेपाल सरकारले वर्षाैंदेखि गाउँ ब्लकमा रहेका कित्ता जग्गालाई नापजाँच गरी अभियानकै रुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दर्ता प्रमाणपत्र वितरण शुरु गरेको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले संयुक्तरुपमा ४६४ थान पूर्जा आज जग्गाधनीलाई प्रदान गरिएको हो । विभिन्न १७ गाउँ ब्लकमा रहेका ५६६ कित्तामध्ये ४५..
‘म त हजुर अरुभन्दा फरक मान्छे, जीवनभरी दुःखीयाको सेवा गरेर रमाउने मान्छे’
काठमाडौँ, १२ जेठ । ‘म त हजुर अरुभन्दा फरक मान्छे, जीवनभरी दुःखीयाको सेवा गरेर रमाउने मान्छे’ माथिको पंक्ति जस्तै समाजसेवामा दिक्षा चापागाईँको जीवन चलिरहेको छ । जन्मघर ताप्लेजुङमा हुँदादेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय उहाँलाई काठमाडौँका सडकपेटीका बालबालिकाको अवस्था देखेपछि त्यसै बस्न मन लागेन् । कम्प्युटर क्लासबाट फर्कदै गर्दा सडकमा देखिएका बालबालिका छोडेर हिड्न उहाँलाई मन लागेन । डेरामा बालबालिकालाई लगेर हेरचाहमा लाग्नुभयो । विस्तारै बालबालिकाको..
तिर्खा मेटाउन खानेपानीमा कोटा प्रणाली, समुदायको गुनासो – पानीमा विभेद
अमरगढी, १२ जेठ ‘कोटेलीको दलित बस्ती सुनकोट’ नाम सुन्दर छ । तर सो गाउँको कथा कुरुप छ । यो गाउँ नवदुर्गा गाउँपालिका–१ मा पर्छ । गाउँमा दलित समुदाय छ । सबैका घरमा निलो रङको ‘जर्किन’ छन् । जर्किन भारतबाट किनेर ल्याएका हुन् । उनीहरु कथा जर्किनबाटै शुरु हुन्छ । बिहीबार दिँउसो ४ बजे । सधैँजसो घरघरबाट महिला निलो जर्किन लिएर हतारहतार गाउँमाथिको..
देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ, १० जेठ । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीकोे प्रभावले शुक्रबार शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । पूर्वमा बनेको न्यूनचापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको प्रभावले मेघ गर्जन र हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा..
बच्चालाई कसरी सिकाउने घरको काम ?
एजेन्सी, १० जेठ बच्चाहरु स्वभावैले आफूभन्दा ठूलाले गरेको कामको सिको गर्न खोज्छन् । जानेर होस् वा नजानेर कुचो लगाउने, भाँडा बर्तन सफा गर्ने, जुत्तामा पोलिस गर्ने, कपडा धुने, खेलौना मिलाउने, ओछ्यान लगाउने, तरकारी काट्ने जस्ता काम गर्न खोज्छन् । उनीहरुको यस्तो काममा बालसुलभ चञ्चताल पनि झल्कन्छ । यद्यपी बच्चाको बुवाआमाले अक्सर बच्चालाई आफुखसी काम गर्न दिदैनन् । किनभने बच्चाको काममा परिपक्कता हुँदैन..
कास्की, ९ जेठ । पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी पिउनेपानीबाट बञ्चित १५ जिल्लाका तीन लाख ३३ हजार ५५० बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । सन् २००८ देखि २०१३ सम्मको पहिलो चरण र सन् २०१४ देखि सन् २०१९ को हालसम्म दोस्रो चरणमा सो परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उक्त परियोजनाकोे प्रधान कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ,..
एजेन्सी, ९ जेठ घरभित्र मनिप्लान्ट लगाइयो भने पैसा कमाई हुन्छ भन्ने भनाई समाजमा छ । अर्थात जति-जति मनिप्लान्ट हुर्कन्छ, फैलन्छ, उत्तिनै घरममा समृद्धि भित्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । को हो मनिप्लान्ट ? मनिप्लान्ट खासमा एक लहरे वनस्पति हो । यो इनडोर अर्थात घरभित्रै रोप्न मिल्ने प्रजातिको विरुवा हो । मनीप्लान्ट पानी वा माटो दुबैमा रोप्न सकिन्छ । इनडोर प्लान्टको रुपमा लगाउँदा यसले घरको शोभा..
बुटवल, ८ जेठ भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक सुधारका क्रममा काटिएका रुखको क्षतिपूर्तिस्वरुप लुम्बिनीमा ४६ हजार बिरुवा रोपिने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष, रुपन्देही डिभिजनल वन कार्यालय र भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक सुधार आयोजनाबीच भएको समझदारीमा लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाभित्र ४६ हजार पाँच सय बिरुवा रोप्ने सहमति भएको हो । उक्त वृक्षरोपणको यही जेठ ४ गते बुद्धजयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ..
काभे्रपलाञ्चोक, ८ जेठ । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले जिल्लामा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको अनुगमन थालेको छ । कार्यालयले पनौती नगरपालिका कुशादेवी, पाँचखाल तथा मण्डन देउपुरमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा सङ्कलन केन्द्रको अनुगमनपछि दूधको नमूना सङ्कलन गरी बबरमहलस्थित नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रीय कार्यालयको प्रयोगशालामा पठाएको छ । कुशादेवीका आठ, पाँचखालका..
गौशाला, ८ जेठ । महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिका–७ मेघनाथ गोरहन्ना गाउँमा विवाह हुनुभन्दा आठ दिन पहिले मङ्गलबार दुलहाले आत्महत्या गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आउँदो जेठ १५ गते विवाह हुनलागेको भङ्गहा नपा–७ बस्ने जयनारायण महराका छोरा २२ वर्षीय सुवोधकुमार महराले आत्महत्या गरेका हुन् । उनको शव घरभन्दा ५०० मिटर परको जङ्गलमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला..
दुल्लु, ८ जेठ राउटे महामुखिया महिनबहादुर शाहीका छोरा शिवराज शाही ३१ वर्षका भए । उनीसँग कोसी, आरीखाट, मधुस बनाउने निखारिएको सीप छ । उनले यो सीप आफ्ना पुर्खाबाटै सिकेका हुन् । मुखिया वीरबहादुर शाहीका छोरा बिर्खबहादुर शाही उमेरले सानै छन् तर, उनीसँग काठबाट विभिन्न सामग्री बनाउने गज्जबको कला छ । उनले पनि यो सीप बुबाबाटै सिकेका हुन् । राउटे युवा हिमराज शाही जङ्गलका..
काठमाडौं, ८ जेठ गर्मीयाममा मात्र होईन जाडोयाममा पनि धेरै मानिसको खुट्टा गनाउने हुन्छ र यो एउटा टाउको दुखाइ विषय हो। तपाईमध्ये कतिपयले कार्यालय वा विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाटमा जाँदा जुत्ता खोल्नपर्ने समस्याले हैरानी व्यहोर्नुभएको होला । यदी तपाईको खुट्टा अत्याधिक गनाउँछ भने जुत्ता र मोजा लगाउन बन्द गर्नुपर्छ । सकेसम्म खुट्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । लामो समयसम्म जुत्ता मोजा लगाइराख्दा छालामा परेका साना साना चिराहरु..
राँझा, ७ जेठ गाउँमै सरकारी सेवा सुविधा सहज रुपमा पाउन थालेपछि स्थानीयवासीले सिंहदरबार अब गाउँमै पुगेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक सेवा र सुविधा आफ्नै घरआँगनमा सजिलैसँग पाउन थालेपछि बाँकेका जानकी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले सिंहदरबार गाउँमै पुगेको अनुभूति गर्न थालेका हुन् । “सार्वजनिक सेवा सुविधा लिनका लागि यसअघि सदरमुकाम नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने अवस्था थियो, स्थानीय सरकार गठन भएसँगै ती सम्पूर्ण सेवा सुविधा गाउँबाटै सहज..
रोल्पा, ७ जेठ । रोल्पा जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका हो, रोल्पा नगरपालिका । रोल्पा नगरपालिका–८ जङ्कोट निवासी १२ वर्षीया बालिका सीता वली शुक्रबार बेलुका काफल टिप्न जान्छिन् र शनिबार बिहानै सदरमुकामतर्फ लाग्छिन् । उनको घर जङ्कोटदेखि सदरमुकाम लिवाङ पुग्न करीब तीन घण्टाको पैदलयात्रा हिँड्नुपर्छ । “काफलको ‘सिजन’ हो, म प्रत्येक शुक्रबार यसरी नै काफल टिप्न जान्छु र शनिबार बजारमा लगेर बिक्री गर्छु”,..
काठमाडौँ, ७ वैशाख कुनै युवतीसँग पहिलोपटक डेटमा जाँदै हुनुहुन्छ र उनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दिगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसका केही उपायहरु छन् । पहिला आफू : पहिलो डेटका लागि तोकेको समयभन्दा केही अगाडि नै पुग्नुस् । सकेसम्म युवती आइपुग्नु भन्दा अगाडि तपाइ त्यहाँ पुग्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक पर्छ । ढोका खोल्नुस् : कुनै रेष्टुरेन्ट या क्याफेमा पहिलोपटक भेट्दै हुनुहुन्छ भने युवती आउँदा ढोका..
रोल्पा, ६ जेठ । रोल्पा नगरपालिका–८ जङ्कोटका १२ वर्षीय सीता वली शुक्रबार बेलुका काफल टिप्न जान्छिन् । टिपेको काफल बिक्रीका लागि शनिबार बिहानै उनी सदरमुकामतर्फ लाग्छिन् । उनको घर जङ्कोटदेखि सदरमुकाम लिवाङ पुग्न करीब तीन घण्टाको पैदलयात्रा हिँड्नुपर्छ । “काफलको सिजन हो, अहिले म प्रत्येक शुक्रबार यसरी नै काफल टिप्न जान्छु र शनिबार बजारमा लगेर बिक्री गर्छु”, उनले भनिन् । उनीसँगै काफल..
काठमाडौँ, ६ जेठ मानिसको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउन केशको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिला हुन् वा पुरुष दुवैको व्यक्तित्व विकासमा केशले विशेष सहयोग पुर्‍याउँछ । सुख्खा, कान्तिहीन एवं रुखो केशका कारण सौन्दर्यमा ठूलो धक्का पुग्छ भने मुलायम, चम्किलो एवं लहलहाउँदो केशले सौन्दर्य वृद्धिमा मद्दत गर्छ । सौन्दर्यका लागि अनुहार, हातखुट्टा आदि अंगजस्तै केशको स्याहार–सुसारमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विशेष गरेर केशको ख्याल राखियो..
भद्रपुर, ५ जेठ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले आगलागीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर हरेक घरमा अग्निप्रतिरोधात्मक सामग्री अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । नगरपालिकाको हालै सम्पन्न नगरसभाले नगरभित्रका सबै आवासीय तथा व्यावसायिक पक्की घरमा अग्निप्रतिरोधात्मक सामग्री राख्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पङ्कज भुर्तेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाको इजाजत लिएर बनाइएका घरमा अग्निप्रतिरोधात्मक सामग्री राखेको यकिन भएपश्चात मात्र नगरपालिकाले घर..
काठमाडौँ, ५ जेठ गर्मी महिनामा आफ्नो हात र शरिरका विभिन्न अंगको सफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन, भोक नलाग्नु र धेरै पसिना आउने कारण शरिरको तापक्रम साधारण हुँदैन र थुप्रै रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले गर्मिमा आवश्यकता अनुसार कमसेकम ३ देखि ५ लिटरसम्म पानी पिउनै पर्छ । यो स्थितीबाट बच्नका लागि आफ्नो खानपिनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ..
नवलपरासी, ३ जेठ । भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गतका विभिन्न नाका शुक्रबार राति १२ बजेबाट बन्द गरिने भएको छ । भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा लोकसभा निर्वाचन २०१९ लाई लक्षित गरी पश्चिम नवलपरासीको सीमा नाका राति १२ बजेबाट बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ । जिल्लाको सीमावर्ती नाका ठूठीबारी, गुठीप्रसौनी, विष्णपुरा र भुजहवा नाका बन्द हुने..
काठमाडौँ, ३ जेठ देशका पहाडी भूभागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेपनि बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा हुने रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा अपरान्हतिर मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् । यस्तै शुक्रबार राति पनि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने देखिएको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ..
काठमाडौँ, २ जेठ । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर आंशिक तथा सामान्य बदली हुनाका साथै मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वी क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाफयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको प्रभावले बदली र हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको मौसामविद् राजु प्रधानाङ्गले बताउनुभयो । शनिबार फेरि पश्चिमी..
Results 740: You are at page 13 of 25